Serivisy Prototyping haingana - Anebon Metal Products Co., Ltd.
Serivisy Machining CNC
Serivisy prototyping haingana
Serivisy fanoratana vy
Serivisy fanariana maty
Ireo faritra mihodina amin'ny CNC
Fitaovana mihodina CNC
Anebon dia tsy manome serivisy namboarina fotsiny ho an'ny famokarana vokatra marobe, Manoloana ny famolavolana indostrialy vaovao, fa manome serivisy fanodinana prototype haingana. Raha manana tetik'asa vaovao ianao eo am-pamolavolana dia afaka manome andinin-tsoratra momba ny fisafidianana fitaovana, fizotran'ny masinina ary fitsaboana eto an-tany izahay. Ary sosokevitra hafa, Ataovy azo ampiharina kokoa ny volavolao, fantaro ara-toekarena sy haingana ny fahaizanao mamorona.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny Rapid Manufacturing dia tsy mitovy amin'ny prototyping, satria mila fifantohana bebe kokoa amin'ny kalitao, ny famerimberenana ary ny fitakiana henjana kokoa amin'ny fampiharana famokarana. Amin'izany lafiny izany, Anebon dia iray amin'ireo vitsy amin'ny indostria izay tena mpanamboatra haingana.
Manokana izahay amin'ny famokarana prototypes avo lenta sy lafo vidy. Miaraka amin'ny haitao sy serivisy isan-karazany, izahay no fivarotana tokana tonga lafatra ho an'ny filanao rehetra ilaina prototyping.
Prototypes dia tena ilaina amin'ny fanatsarana ny famolavolana, ary maro amin'ireo mpanjifanay no mila mamokatra ampahany ara-batana haingana hanamarinana ny endrika na hahazoana fotoana fivarotana fohy.
Satria ny faritra maro novokarina tany amin'ireo magazay prototypot amin'izao fotoana izao dia mitaky milina dimy sisiny, ny serivisy famolavolana sy famolavolana 5-axis dia be fangatahana fampiharana maro samihafa amin'ny indostria marobe ao anatin'izany ny indostrian'ny aerozotra, ny indostrian'ny sambo, ny indostrian'ny familiana fiara ary koa ny angovo indostrian'ny famokarana. Ny tombotsoan'ny milina dia misy ny famitana ambony ambany kalitao, ny toeran'ny toerana misy azy ary ny fotoana fohy fitarihana ary mamorona sisin-dàlana lehibe ho an'ireo orinasa vaovao.
Fa maninona no mifidy Anebon amin'ny prototyping haingana?
Fanaterana haingana: Prototype haingana 1-7 andro fanaterana eran-tany, fanodinana famokarana volume ambany 3-15 andro fanaterana manerantany;
Soso-kevitra mety: Manolora soso-kevitra mety sy ara-toekarena ho anao amin'ny fitaovana, teknika fanodinana ary fitsaboana ambony;
Fivoriambe tsy andoavam-bola: Ny tetikasa tsirairay dia voasedra sy mivondrona alohan'ny fandefasana mba ahafahan'ny mpanjifa mivory mora foana ary misoroka ny fandanian'ny fotoana ateraky ny fanarenana.
Fanavaozana ny dingana: Manana mpiasan'ny varotra 1 ka hatramin'ny 1 matihanina izahay hanavao ny fandrosoana sy hampitana ny olana mifandraika amin'ny Internet.
Serivisy aorian'ny fivarotana: Ny mpanjifa dia mahazo valiny amin'ny vokatra ary hanome vahaolana izahay ao anatin'ny 8 ora.
Ho an'ny fangatahana momba ny vokatray, azafady avelao ny mailakao anay ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay.
Anebon metal vokatra Co., LTD